DAAWO VIDEO: Maxay DF Somaliya ka tiri hakinta xeritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab! | Horumar Online
DAAWO VIDEO: Maxay DF Somaliya ka tiri hakinta xeritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab!
November 17, 2016 | Filed under: Dhacdooyinka,WARARKA MAANTA | Posted by: Editor Muqdisho (Horumar Online) – Dawlada Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go’aanka dawlada Kenya ee ah in xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab dib loo dhigo muddo 6 bilood ah oo dheeraad ah.
Shalay ayaa dawlada Kenya ay sheegtay in bishaan Nofeembar aan la xiri karin xeryaaha. Arinkaa ayaa ahaa qorshaha; waa in la xiro bishaan 30keeda.
Laakiin waxyaabo badan oo aan diyaar ahayn dartood ayaa waxaa Wasaarada Arimaha Gudaha ee Kenya ay iminka sheegtay in ilaa bisha Mey ama 5aad ee sanadka soo socda xiritaanka hakad la galin doono.
HALKAN KA DAAWO SHIRKA JARAA’ID EE DOWLADDA KENYA
“Waxaan rabaa inaan u mahad naqo dawlada Kenya ogolaanshihii ay ogolaatay in la kordhiyo mudada ay sii furnaaneyso xerada qaxootiga Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ee Dhadhaab’. Sidaa waxaa yiri safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Jamaal Maxamed Xassan.
‘Muddo waxaa nala siiyay 6 bilood ah; waxaan rabnaa inaan hadii Alle nala qabto aanu qabano wixii aanu qaban karno’. Intaana wuu raaciyay.
Wuxuu sidoo kale safiirku sheegay in heshiiskii horay loo gaaray ee ahaa inaan qaxootiga la qasbin ee hadii ay doonaan iskood ay Soomaaliya ugu noqon karaan uu wali shaqeynayo.
Waxaa sidoo kale shir safiirka iyo Wasiirka Arimaha Gudaha ee Kenya Joseph Nkaisery iyo madax kale ay ka wada qeyb galeen ka hadlay Ergeyga QM u qaabilsan qaxootiga Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Afey oo sheegay in laga shaqeynaayo in la kala fududeeyo dadka kunool xeryaha Dhadhaab.
‘Dadka Kenyanka ah ee qaatay sharciga qaxootiga in loo soo celiyo Kenyan-nimadooda. Dadkaas oo dad faro badan ah; dadka Soomaalida ah oo warqadaha Kenya qaatay ayagana in loo soo celiyo Soomaalinimadooda’. Sidaa ayuu yiri Mudane Maxamed Cabdi Afey.
‘Intii rabta inay ku noqoto si fudud oo ay ayagu raali ka yihiin isla markaana beesha caalamka dhaqaale ku filan loo raadiyo sidii wadankaas dib loogu dhisi lahaa..’ Intaana wuu ku daray Maxamed Cabdi Afey.
Arinkaa ah dib u dhigida mudada la xirayo xeryaha ayuu asna soo dhaweeyay dhinaciisa wuxuuna sheegay in ikhtiyaar loo siinayo qaxootiga Soomaalida ah ee xeryaha Dhadhaab ku noqoshada Soomaaliya iyo joogitaanka Kenya kii ay doonaan labadaa arin.